SADDAAM XUSEEN MUXUU KU SUGAN YAHAY?
“Saddaam oo tiriyey gabay uu ku caayayo Bush”
Madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq oo imminka ku jira xabsiga ayaa noloshiisa intiisa badan la sheegay in uu ku qaato akhriska iyo tirinta gabayada, waxaana gabayadiisa la sheegay in uu ka mid yahay mid uu ku caayayo Madaxweyne George W. Bush, Saddaam Xuseen sidoo kale waxa uu waqtigiisa ku qaataa akhrinta Qur’aanka Kariimka ah iyo daryeelka dhirta ka baxda xabsiga gudihiisa.
Saddaam Xuseen wuxuu qaataa cuntadiisa caadiga ahayd, inkastoo culeyskiisuu uu wax badan iska dhimay, wuxuu aad u jecel yahay cunista Buskut-ka iyo waxyaabaha mac-maaanka ah.
Muuqaalkan ku saabsan nolosha cusub ee Saddaam Xuseen waxaa daaha ka rogay Wasiirka xuquuqda beni’aadamka ee dalka Ciraaq Bakhtiyaar Amiin, isagoo arrintan gaarsiiyey wargeyska lagu magacaabo “The Guardian” ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska. Saddaam Xuseen sida mas’uuliyiintii maamulkiisa ayaa la sheegay in uu cuno cunto dhameystiran oo weliba kala duwan, telefishinka ma daaawdo, Raadiyaha ma dhegeysto, wargeysyadana ma akhristo, balse taa beddelkaada waxa uu akhristaa oo illaa iyo hadda u yaalla 145-Kitaab oo intooda badan ah riwaayado iyo sheekooyin, kuwaas oo u soo mara Bisha Cas ee Adduunka, kuwaasoo ergooyin ka tirsan 6-toddobaadba mar u taga Saddaam Xuseen.
Bakhtiyaar Amiin wuxuu kale oo uu yiri “Saddaam Xuseen waqtigiisa intiisa badan wuxuu ku qataa akhrinta Qur’aanka Kariimka ah, isagoo howlo yar-yarna ku dhex qabta xabsigiisa, sidoo kalena xoogaa jirdhis ahna waxa uu ku sameeyaa xabsiga gudihiisa, dhinaca kalena beer yar oo ku taalla xabsiga gudihiisa ayuu mar walba waqtigiisa qaarkiis isku howlaa sidii uu u hagaajin lahaa.
Bakhriyaar oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri “Saddaam Xuseen waxa uu tiriyey gabay uu ku caayayo Bush, balse waqti uma aanan helin akhrintiisa”. Saddaam Xuseen inkastoo uu xabsi ku jiro haddana noloshiisu waxa ay u muuqataa in uu yahay nin ku qanacsan dhibaatada uu ku jiro, wuxuuna aad isugu howlaa dhinaca akhriska oo lagu fasiri karo in uu doonayo in uu ku baabi’iyo dhibaatadii baaxadda lahayd ee soo gaartay iyo goobta aan munaasabka u ahayn ee uu ku jiro.